Qaraxyo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Qaraxyo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.
Qaraxyo xiriir ah ayaa ka dhacay xero ciidan oo maleeshiyaatka dowlada Ridada ay ka sameysteen qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho,iyadoona faahfaahin laga helayo qaraxyadaasi.
Qaraxyadan waxaa si gaar ah loogu weeraray Labo saldhig oo maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka sameysteen qeybo ka mid ah degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa Kowaad waxaa lagu weeraray saldhiga maleeshiyaatka dowlada ay ka sameysteen gudaha dhismaha Warshadii hore ee Barfuunka ee degmada Hurwaa,iyadoona dhawaaqa qaraxa Bam si aad ah looga maqlay xaafadaha degmada Hilwaa.
Qaraxa Labaad waxaa lagu weeraray saldhiga maleeshiyaatka dowlada ay ka sameysteen dhismaha Warshadii hore Nacnaca ee degmada Hilwaa,waxa uu Bam gacmeedku ku qarxay bartamaha saldhigaasi.
Si rasmi ah looma xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha maleeshiyaatka Murtadiinta kasoo gaartay Labadan qarax ee lagu weeraray saldhigyada dowlada Farmaajo ay ka sameysatay dhismayaasha Warshadihii hore Barfuunka iyo Nacnaca ee degmada Hilwaa.
Qaraxyadan waxey kusoo aadayaan xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay gudaha xaafada Suuq Bacaad ee degmada Yaaqshiid ku dileen askari ka tirsan maleeshiyaatka Booliska kaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdulle Maalin.